Somalia: Daawo Wasiirka Amniga Maamulka Puntland Oo Ka Hadlay Dhimashadii Badnay + Dhawacii Maanta - Wargane News
Home Somali News Somalia: Daawo Wasiirka Amniga Maamulka Puntland Oo Ka Hadlay Dhimashadii Badnay +...
“ waxaas ay sheegayaan waxba kama jiraan, dadka ay laayeen ama dhaawaceen waxay u badan yihiin dad shacab ah oo isugu jira haween, odoyaal iyo caruur, oo qaarkood dhaawacoodii la keenay cusbitaaladda” ayuu yiri Wasiirka amnigu.
Wuxuu sheegay in Ciidamadu dowladu ay iska difaaceen weerarka ururka Al-shabaab ay ku soo qaadeen saldhiga af-urur, waxaa kaloo uu sheegay in rag badan ka dileen maleeshiyaadka Al-shabaab, oo ay ku dabajiraan firxadkoodii oo sida uu hadalka u dhigaye.
Wasiirka oo shir jaraa’id oo su’aalo laga waydiiyay khasaaraha ciidamadda iyo dadka shacabka ah ka soo gaaray weerarkii xalay, waxaa uu sheegay in khasaaraha ay gadaal ka soo sheegi doonaan.
Dhinac kale, Warar laga helayo degaamadda Af-urur ayaa sheegay in dagaalkii xalay ay ku dhintaan dad ka badan 50 qof oo isugu jira dadkii degaanka deganaa iyo ciidamada Daraawiishta oo saldhig halkaasi ku lahaa, waxaa kaloo dhaawacyo gaaraya 24 qof la geeyay cusbitaaladda Degmooyinka Carmo iyo Bosaso ee gobolka Bari.
Ururka Al-shabaab ayaa sheegtay masuuliyada weerarkaasi, waxayna sheegeen in dagaalkaasi ay ciidamadda dowladda Puntland kaga dileen askar ka badan 60 , balse ma jiri cid madax banana oo xaqiijinaysa sheegashadda kooxda Al-shabaab.
Haddii la xaqiijiyo, wuxuu noqonayaa khasaarihii ugu badnaa ee ciidamadda dowladda ka soo gaara dagaal qura, tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya dowladda Puntland iyo ururka Al-shabaab muddo haatan laga joogo 7 sanno ah.
Somaliland: State Confirms Influx of Yemeni Refugees